Imingcele Yemivuzo Yemingcele | Martech Zone
NgoLwesine, Novemba 30, 2006 NgoLwesine, Novemba 30, 2006 Douglas Karr
Ngibe nekhadi lemiklomelo yemingcele okwesikhashana futhi ngithole nje i-imeyili ukuthi ngineqembu lemali engingalisebenzisa. Ngingene ku-inthanethi futhi ngabhaliswa newebhusayithi yabo. Ngaleso sikhathi, babefuna ukungibonga ngokubhaliswa futhi bangivuza ngokukhetha okukodwa kokuthathu:
U-20% ukhiphe into eyodwa lapho ngisebenzisa u- $ 20 noma ngaphezulu
Isiphuzo esishisayo samahhala esingu-12oz
$ 10 lapho ngisebenzisa u- $ 50 noma ngaphezulu
Ngabe ukhona omunye umuntu okuthola kuhlekisa ukuthi # 1 no # 3 bayefana? Uma ngisebenzisa ama- $ 50, ngabe isikhuthazi akufanele sibe ngaphezu kwama-20%?
Mhlawumbe yimina nje. Ngiyakwazisa, noma kunjalo! Futhi… ngiyayithanda impela iMingcele!
Mar 6, 2007 ku-10: 48 PM
20% isephulelo esingu- $ 100 = $ 20 isephulelo
$ 10 isuswe ku-100 = $ 10 isephulelo
Aug 9, 2007 ku-2: 07 AM
Kungakho isihloko sithi 'imingcele ivuza izibalo', okusho ukuthi, akunanoma iyiphi inzuzo yokukhipha u- $ 10 nge $ 50 noma ngaphezulu isigqebhezana.
Jan 4, 2011 ngo-2: 11 PM
Umehluko phakathi kuka-1 no-3 ngukuthi # 1 ingasetshenziswa entweni eyodwa kuphela. # 3 ingezinto ezingenamkhawulo.